कल्पनाका श्रीमान मिडीयामा, श्रीमती प्रहरी हिरासतमा परेपछि यसो भन्छन् (भिडियो सहित)
August 13, 2020 2071
कल्पनाका श्रीमान पहिलो पटक मिडि’यामा आएका छन् । कल्पना पनि आफ्नो दोस्रो श्रीमती भएको बताएका छन् । पहिलो श्रीमतीसंग बस्दै आएका कल्पना’का श्रीमानले आफुह’रुको अहिले सम्म सम्बन्ध विच्छेद पनि नभएको र सम्बन्ध र सम्पर्क पनि नभएको बताएका छन् ।
आफुहरुको चार वर्ष यता कुनै स’म्बन्ध नभएको बताएका छन् । उनले छोरीको विवाहका विषयमा एक पटक मात्र फो’नमा कुरा भएको बताएका छन् । आ’फुले छोरी’को विवाह गरिदिन्छु भन्दा नमानेपछि आफ्नै तरिकाले गरिदिएको र आफु पनि नगएको बताएका छन् ।
उनले युटयु’वमा घटनावारे जान’कारी पाएको बताएका छन् । उनले कृष्णबहादुर वोहरालाई नचिनेको पनि बताएका छन् । उनले आफु काठमाडौ जाँदा कल्प’नाको अरुसंग सम्बन्ध र सम्पर्क भएको थाहा पाएपछि आफुले कल्पनाको जि’वन देखि निस्कि’एको बताएका छन् ।
उनले कल्पना’वाट ३ छोराछोरी भएको बताएका छन् । उनले आफुसंगको सम्बन्ध विग्रिएका कारण कल्प’नाले त्यस्तो गरे’को होला भन्ने नसोचेको बताए । उनले भने, पहिला एउटा कुखुरा पनि काट्न नसक्ने’ मान्छेलाई कसरी मान्छे नै काट्ने आँट कसरी आयो ? म अचम्म परेको छु उनले भने ।
उनले आफु विदेश जानु भन्दा अघि श्रीमती आफ्नो घरमा बसेको तर परिवारका अरु सदस्यसंग मिल्न नसकेपछि नेपा’लगन्जमा अर्को घर बनाएर राखि’दिएको बताएका छन् । नेपालगन्जमा श्रीमती राखेर आफु फेरी विदेश गएपछि कल्पना त्यहाँ पनि अलपत्र छोडेर काठमाडौ आएर बसेको बताएका छन् ।
कल्पना घटनामा प्रहरी हिरासतमा परेपछि छोरा’छोरी अलपत्र परेका छन् । कल्पनाको श्रीमानले छोरालाई सानो देखि नै आफुहरुले हुर्काएको बताएका छन् । उनले अब आफ्ना सन्तानलाई भने आ’फुले हेर्ने बताएका छन् ।
कल्पनाको मा’इती पक्ष र अरुले पनि छोराछो’रीको भविष्यको बारेमा प्रश्न उठेपछि अब आफुले छोराछोरी ल्याउने बताएका छन् । विवाह गरेर गएकी छोरी पनि आफ्नो भाईलाई स्याहा’र सुसार गर्नु भनेर भन्नु आएको पनि बताएका छन् ।
विवाह गरेर गएपछि छो’री आएकै थिइनन्, तर आज छोरी पनि घर आएर भा’ईको रोएर बेहाल छ भाईलाई हेर्नुपर्यो भनेर गएको बताएका छन् । उनले आफ्ना छोराछोरीको जिम्मा आ’फुले लिने बताएका छन् । यसको भिडियो तल छ हेर्नुहोला
त्यस्तै काठमाडौंको गोंगबुमा आइ’तवार ह त्या भएका कृष्णबहादुर वोहोराको परिवारले घटनामा संलग्नलाई कडा स’जाय दिन माग गरेका छन् । कृष्णबहा’दुरको छोरी अहिले मिडियामा सार्व’जनिक भएकी छन । कसैले उनको स्थायी घर रोल्पा भएको पनि बताइए’को छ ।
रेखा बोहोरा उनको छोरी हुन् । उनी दागंको घोराहीमा बस्छिन् । कृष्णबहादुर बोहोरा रेखाको कान्छो अंकल हुन् । रेखाको अंकलसंग फागुनमा पछिल्लो पटक भेट भएको थियो । त्यसपछि उनीसंग तीन महिना यता फोनमा पनि कुरा’कानी प’नि भएको थिएन ।
कृष्णबहादुरले आफु काठमाडौमा बस्ने र काम पनि गर्ने गरेको बताएका थिए । कृष्णबहादुरको श्रीमती भारतमा बस्ने र उनले त्यहाँ दाँतको अस्पतालमा काम गर्छिन । कृष्णबहा’दुरले आफ्नो छोरालाई पनि संगै लिएर गएको भन्ने बुझिएको छ ।
कृष्णबहादुर पहिलाको घर रोल्पा हो । पछि उनीहरु दागं झरेका थिए । दागंको हापुरमा कृष्ण’को घर हो । उनको जग्गा जमिन पनि हापुरमै छ । तर उनीहरु दागंमा धेरै बसेनन् । कृष्ण काठमाडौ काम’का लागि गएको र उनको श्रीमती भारतमा गएका हुन् ।
उनले आफुले अनलाईन स’पिगं सम्बन्धि काम गर्ने बताएका थिए । केही वर्ष अघि कृष्ण र उनको श्रीमतीबीच केही सम्बन्ध विग्रिएको थियो । तर पछिल्लो ‘समय भने उनीहरुको सम्बन्ध रा’म्रो भएको पनि बताए । उनले दुईवटा विवाह गरेका हुन् ।
जेठी श्रीमती मानसि’क रुपमा विरामी भए’का कारण उनले दोस्रो विवाह गरेका हुन् । जेठी श्रीमतीवाट दुई छोराछोरी र कान्छी श्रीमतीवाट एउटा छोरा छ । जेठी श्रीम’तीवाट जन्मि’एको एउटा छोरीको सानैमा निधन भएको छ ।
उनले सोमवार साँझ घट’नाबारे जानकारी पाए’को बताइन् । उनले आफ्नो बुवा नभएको र कृष्णबहादुरले नै आफुलाई बुवाको माया दिएको बताएकी छन् । कृष्णबहादुरले नै उनला’ई पालेका थिए । पढाउने लेखाउने सबै कृष्णबहादुरले नै गरेका थिए ।
२ वर्षको उमेरमा आफ्नो बुवा तत्कालिन माओ’वादी द्ध न्द्धमा गुमाएकी थिइन् । त्यसपछि कृष्णबहा’दुरले नै छोरी सरह माया गरेर पालन पोषण गरेका छन् । उन’ले अहिले आफ्नो अंकल’लाई त्यस्तो बनाउनेलाई कडा कारवाही गर्न माग गरेकी छन् ।
Prevकुखुरा’को मासुमा पनि देखियो कोरोना भाइ’रस संक्रमण….
आज कुन ठाउँमा कति संक्रमित थपिए ? हेर्नुहोस् पूरा विवरण सहित
अमृत सापकोटा र आयुशाको पहिलोपटक दमदार दोहोरी (हेर्नुहोस भिडियो)
बोईलर कुखुराका चल्ला’लाई मेहन्दी लगाएर ‘लोकल’ भन्दै बेच्ने भारतीय नागरिक प’क्राउ